Iwu Kirchoff: iwu bụ isi maka ọnụ ọkụ eletrik | Akụrụngwa n'efu
Isaac | | Ihe eletrọniki, mmụta, General
dị ka Iwu Ohm, las Iwu Kirchhoff Ha bụ iwu ọzọ dị mkpa maka ngwa elektrọnik. Iwu ndị a na-enye anyị ohere inyocha voltage na ike ugbu a na ọnụ, ihe dị mkpa iji mata akụkụ nke sekit.
Yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ mara ihe banyere haM na-akpọ gị òkù ka ị gụọ nkuzi a niile na ntọala dị mkpa na itinye ha n'ọrụ na sekit sekit ...
1 Ọnụ, alaka, ntupu
2 Iwu Kirchhoff
2.1 Iwu mbụ ma ọ bụ ọnụ
2.2 Iwu nke abụọ ma ọ bụ meshes
Ọnụ, alaka, ntupu
Mgbe ị nyochachara sekit, ị nwere ike ịmata ọdịiche dị n'etiti akara dị iche iche nke ihe ndị ahụ, usoro njikọ, njikọ, yana kwa ọnụ. A na-akpọ ndị nke ikpeazụ alaka ma ọ bụ ntupu.
Iwu Kirchhoff na-enyocha iji akụrụngwa eletriki na ọnụ ndị a. Nke ahụ bụ, na nkwụsị ebe abụọ ma ọ bụ karịa jikọrọ ọnụ. Dịka ọmụmaatụ, dịka isi ihe ị nwere ike ịhụ na isi ihe osise nke isiokwu a ...
na Iwu Kirchhoff Ha bụ nha anya abụọ ma ọ bụ nha anya bụ ndị gbadoro ụkwụ na ụkpụrụ nke nchekwa ike na ịtụ ụgwọ sekit eletriki. Enwere ike nweta iwu abụọ ahụ site na ị nweta akara ngosi Maxwell a ma ama, agbanyeghị na Kirchhoff bu ụzọ mee nke a.
Aha ha sitere n'aka onye nchọpụta ha, ebe ọ bụ na Gustav Kirchhoff kọwara ha na nke mbụ ya na 1846. Ma ugbu a ha na-eji ọtụtụ ebe na injinịa eletriki na eletrọniki ịmata voltaji na nke dị ugbu a na eriri elekere, yana Iwu Ohm, ha na-etolite ngwa ọrụ dị irè maka nyocha.
Iwu mbụ ma ọ bụ ọnụ
«N'ebe ọ bụla, nchikota algebra nke ihe ike na-abanye ọnụ ya na nha anya algebraic nke ike na-ahapụ ya. N'ihe nha anya, nchikota okwukwo niile site na uzo ya na efu.»
M = M1 + Mụ onwe m2 + Mụ onwe m3
Iwu nke abụọ ma ọ bụ meshes
«Na sekit mechiri emechi, nchikota nke volta niile na-adaba na voltage zuru ezu. N'ihe nha anya, nguko algebra nke ike di iche iche eletriki di na sekit bu ihe efu.".
-V1 +V2 +V3 = M R1 + M R2 + M R3 = A · (R1 + R2 + R3)
Ugbu a ị nwere ike ịmalite itinye ihe ndị a usoro dị mfe iji nweta nkọwa nke ugbu a na voltaji na sekit gị ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » mmụta » Iwu Kirchhoff: iwu bụ isi maka ọnụ na sekit eletriki
Ntuziaka ọsọ ọsọ: ntinye agba nke resistors